Inkonzo yethu-Camei Ele&Stationery Co., Ltd.
1. Malunga nombuzo
Okokuqala, ukuba ukhetha iimveliso eziyilwe ngokuzimeleyo yinkampani yethu, sinokubonelela ngelona xabiso lilungileyo ngokweemfuno zovavanyo lwemveliso kunye nobungakanani bemveliso kwimarike yakho.（Ukusuka kwiwebhusayithi yethu, ikhathalogu, isindululo somntu othengisayo, njalo njalo. kwi)
Okwesibini, ukuba abathengi banike imifanekiso / iisampulu ukuba babuze, sinabasebenzi abakhethekileyo be-accounting ukubala ngokuchanekileyo isicatshulwa semveliso ngokweemfuno zabathengi. Sinenkqubo yobalo-mali engqongqo kunye nendlela yophicotho-zincwadi iya kucatshulwa kwangolo suku lunye.Njengomfanekiso ongezantsi njengo.Ngoko ke,Nceda ukholelwe kubuchule bethu kunye nesimo sengqondo esinoxanduva
2. Malunga nesampulu
Sineqela lethu loyilo lobuchwephesha kunye nobungqina, kunye nabaqulunqi ababini ababandakanyeka kwiminyaka engaphezu kwe-10 yamava oyilo lwemveliso, i-template yokuvula inkosi, imveliso emine yokuqinisekisa. Sinokuba nemveliso egqityiweyo kwiiyure ezingama-24. Kwaye sinokwenzelwa wena, kodwa kwakhona ngokwemizobo yakho ubungqina obuchanekileyo. Kungakhathaliseki ukuba uluphi uhlobo loyilo lokushicilela olufunayo, uyilo lwepateni, uyilo lwesitayile.